Cadaalad Darada iyo Cawaaqib Xumadeeda.
Scw: salaantaas ka bacdi waxaan salaamayaa umadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto,waxaana ilaahay ugu baryayaa nabad waarta iyo heshiis iyo midnimo iyo amxaarada oo dalkeenna kaga baxda si shuruud la,aan ah.
Waxaan u soo noqonayaa cinwaanka maqaalkayga oo ah cadaalad darada iyo cawaaqib xumadeeda iyadoo ay cadaaladu tahay sheyga keliya oo hadii la heli ay yaraanayso dhibaato colaad iyo is qabqabsi.
Hogaanka umadda oo cadil ah ama garsoor fiican waxaa jecel ilaaheenna xumuhu ka fogyahay ,waxaa kale oo isaguna amaanay rasuukeenna caleyhi salaatu wasalaam.
Aaayadahan kor ku xusan runtii haddii uu qofka bani aadamka ahi si fiican oo hufan u fahmo micnahooda iimaana uu ku darsado waxaan filaayaa inaaanu mar dambe dulmina sameyeen cidna u geysteen dhibaato ,noloshuna waxay ahaan lahayd mid lagu raaxaysto laguna badbaado inta loo gudbaayo aakhiro iyo la kulanka xisaabta.
Rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlaayey kuwa harsada hooska ilaahaeena xumaantu ka dheertahay waxauu ugu horeysiiyey in kuwa hooska ilaahay harsanaaya uu ka mid yahay nin hogaamiye ah ooo garsoore fiican ah oo aan dadka uu u taliyo kala dhoweysan una kala eexan.
Hadaba waxaa is weydiin leh maxaa imaanayaa haddii la waayo garsoor fiican oo ka soo bilaabma ilaa hogaanka sare kuna dhamaada qofka iyo inta uu masuulka ka yahay?
Waa cadahay jawaabtu waxaa imanaya waxii soomaaliya ka dhacay iyo wax ka xun , uma baahna in dib loogu noqdo oo waan ka dheregsanahay sheekadaas waxaanse xusuusinayaa umadda soomaliyeed in waxa halkaa maanta ina dhigay ay tahay garsoorka oo inaga xumaaday oo dadka kale xaquuqdoodii lagu tuntay ,la dulmiyey loo geystay gabood fal la yasay la xaqiray hantidoodii laga dhacay ,guryahoodii laga saaray iwm.
Gabood falkaas kama ay masuul aha beel go,an iyo 2 qof toona waxaase geystay umadda soomaaliyeed oo dhan ilaa maantana tubtaas ayaa lagu joogaa oo dulmigii sidii buu u socdaa ilaa laga waantoobona lama gaarayo horumar diib u dhac mooyaane.
waxaan aniga oo soo gunaanadaya qoraalkayga idin leeyahay ha loo noqdo dastuurka ilaahay ee haddii la raaco aan cidina dulmi loo geysanayn umaduna ay cagta saarayso tubta horumarka nabadda iyo khayrka ,aduun iyo aakhiroba.
Haddii aad cadaaliyo wanaag curiso waa uunba
cidaadiyo hadii deriska aad cayn u wada soorto
caqiidada hadaad haysatiyo camalu khayroo dhan
oo aadaan ciilany bulshada wada ciseeynayso
cirshigaad amaan kaga heshaa caadilkaa sare e
hadii aadse coomaade iyo tahay bahal cantuugaaya
oo ay cabaadaan intii ciidda dadkii ciidda kula joogay
ma oghatay casiiskeen alluu inuu caroonaayo
ma ogtahay ninkii caasiya caymo muu helo e
ma ogtahay cadaabtii ayaa lagu cayuuqaaye
war cayaayir maahee ka kaca ceebta laga roone.